Julien Nonnon dia nanova ny alina Paris ho lasa zoo an-tanàn-dehibe | Famoronana an-tserasera
soratsoratra manome loko sy spontaneity be dia be izy ireo eny an-dalambe amin'ny tanàna lehibe, toy ny 1010zz, ary ireo mpanakanto isan-karazany dia nandalo teto izay manana fikitihana manokana hamoahana antsika amin'ireo volondavenona sy loko mankaleo amin'ny maro amin'ireo lalana andehananay.
Julien Nonnon dia manohy mamakivaky ireo tendro ireo hitondrana antsika any amin'ny sasany sary biby ho an'ny seho tokana ary tena natoraly rehefa novinavinaina tamin'ny rindrina sy rindrin'ny toerana sasany tao amin'ny tanàna tsara toa an'i Paris.
Nonnon dia mpanakanto amin'ny sary ary mpikambana ao amin'ny LE3 Creative Studio izay mitarika ny mpijery hijanona tsy ho voahozongozona sy talanjona amin'ireo tarehin-karazan-biby rehetra natsangana tamin'ny alin'ny Paris.
"Safari an-drenivohitra: Bibidia any Paris" dia ny tetikasany vaovao izay ezahany hidina an-tany foana amin'ireo arabe ireo, volondavenona ny ankamaroany, mba hampitolagaga antsika amin'ireo dian-tongotra azon'ny olona halina amin'ny alina milamina aorian'ny andro be atao sy be atao.
Julien Nonnon dia mampiseho amintsika ny azy teknika tsara amin'ny fametrahana kinetika ary ny famoronana nomerika amin'ny alàlan'ny fanovana ny zoro na ny kianja ho dingana mahavariana alohan'ireo biby hita taratra ireo. Akanjo toy ny chimpanzees, orsa na saka dia toy ny hoe anisan'ny olom-pirenen'i Paris izy ireo saika tsy voamariky ny karazana fitafiana an-drenivohitra.
Asa tsara tsy ho an'ny projet ihany, fa noho ny fahalalana ny fomba fisafidianana ny akanjo tsirairay anaovan'io gidro io amin'ny gitara na ilay zebra miaraka aminy amin'ny duo andriamby rehefa mijery azy ireo.
Fomba iray tena tsara hanaronana ny endrika arabe Vehivavy Parisy manana io fahitana an'i Nonnon io ka ny alina dia lasa zavatra mihoatra ny jiro mahazatra ary ny sasany noho ny hafa handravaka ny doka.
Manana ny Facebook-ny ianao hanohy ny asany lehibe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Safari Safari an-tanàn-dehibe
"Miparitaka" ny fitambaran'ireo nudes sy aizina tonga lafatra nataon'i Olivier Valsecchi